Wafti uu hogaaminayo Gen. C/samad Cali Shire, M/weynaha ku xigeenka Puntland oo dalka dib ugu soo laabtay. – Radio Daljir
Wafti uu hogaaminayo Gen. C/samad Cali Shire, M/weynaha ku xigeenka Puntland oo dalka dib ugu soo laabtay.
Garowe, Oct, 12 – Wafti uu hoggaaminayo madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland General C/samad Cali Shire ayaa maantay ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee Garowe International Airport, waxaana socdaalka M/kuxiggeenka ku wehliyay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda Puntland.
M/kuxiggeenka dawladda Puntland General C/samad ayaa sheegay in safaro kala duwan uu ku tagay dalalka Ethopia iyo Kenaya, dhawaanahaana uu ku sugnaa magaalada Nayrobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana uu hadalkiisa madaxwaynuhu ku daray in xubnaha ku wehliya safarka ay ka yimaadeen meelo kale duwan oo shaqooyin ay ugu maqnaayeen.
C/samad Cali Shire ayaa saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha Garowe, waxaana uu xusay xubnaha ku wehliya safarkiisa inay kala ahaayeen wasiirka hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland marwo Caasho Geelle Diiriye, wasiirka caddaalada dawladda Puntland mudane Khaliif Ajaayo, duqa degmada Garowe C/casiis Nuur Cilmi, iyo agaasimayaal wasaaradeed.
M/kuxiggeenka ayaa tilmaamay arrimaha uu markii hore u gaaray dalka Ethopia inay ka mid ahaayeen iskaashiga dhanka ammaanka, ganacsiga, iyo wadashaqaynta ka dhaxaysa dawladda Puntland iyo xukuumada Ethopia, waxaase jira warar tilmaamaya in ujeedooyinka safarkiisa ay ugu weynayd siidaynta mid ka mid ah xildhibaanada Puntland oo dhawaan ay xirtay dawladda Ethopia, balse markii danbe wadahadal ka dib, dib u helay xoriyadiisa.
Safarka uu magaalada Garowe kusoo gaaray waftiga uu hoggaaminayo M/kuxiggeenka dawladda Puntland General C/samad Cali Shire ayaa ahaa mid aan horay loo shaacin, waxaana loo badinayaa inuu salka ku hayo casumaada uu madaxweyne Faroole uu ka helay dawladda Brietin. Taasina ay sababtay inuu dalka dag dag dib ugu soo laabto madaxweyne kuxigeenku.